Cabo Verde Airlines kpughere atụmatụ ọhụrụ maka Boston
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Cabo Verde Airlines kpughere atụmatụ ọhụrụ maka Boston
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Cabo Verde na -agbasa • News • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
na Ọdụ ụgbọ elu Boston Logan International ịbụ otu n'ime ndị kachasị ekwo ekwo na USA, yana nde ndị njem 40.9 na-elekọta na 2018, yana Boston ịnọ n'ụlọ maka nnukwu obodo Cape-Verdean, obodo ahụ nwere ọrụ dị mkpa na Cabo Verde ụgbọ elu'Atụmatụ mgbasawanye atụmatụ maka North America.
Ugbu a na-efe efe site na Boston ruo Praia (Cabo Verde) na Mọnde, CVA chọrọ ịbụ ndị ụgbọ elu nnabata maka ndị America na-abịa Africa yana maka ndị Africa agbaga na United States of America.
Nke a ga-ekwe omume site na CVA's hub na Sal Island, site na ebe ụgbọ elu ahụ na-efega na Cape-Verdean ndị ọzọ yana obodo ndị dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ Africa, dị ka Dakar na Lagos, na Nigeria, nke ga-amalite na Disemba 9th na ụgbọ elu ugboro ise n'izu. Ogige CVA na-ekwenyekwa ụgbọ elu na-aga Lisbon (ugboro ise n'izu), Milan (ugboro anọ n'izu) Paris na Rome (ugboro atọ n'izu), na ebe ndị ọzọ dị na Brazil.
Jens Bjarnason, onye isi oche na onye isi oche nke Cabo Verde Airlines, na-ekwu, sị: “Boston bụ obodo a ma ama maka obodo Cape-Verdean, anyị nwekwara obi anụrị ịnọ ebe a. Anyị ji nnukwu ekele na-ele njikọ a anya, dịka njikọ dị n'etiti Cabo Verde na Boston nwere nnukwu akụkọ ihe mere eme. ”
Onye isi oche ga-eweta atụmatụ ọhụrụ maka ụgbọ elu na mkparịta ụka ndị nta akụkọ, na November 16th, na Consulate General nke Cabo Verde na Boston, bụ ebe a ga-ekpughe atụmatụ Boston ọhụrụ yana ụzọ ndị na-abịa.
Cabo Verde Airlines, nke bụbu TACV - Transportes Aéreos de Cabo Verde, gafere usoro mmezigharị, ugbu a nwe ya na 49% site na steeti Cabo Verde na 51% site na Loftleidir Cabo Verde.